Admin – Page 2 – Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany – MADAGASIKARA
Mba hanaiky hotohinin’i Fon’i Jesoa anie ireo mijaly ka hahita ny Lalan’ny fiainana. Entanin’ny Papa Ray Masina indray isika mandritra ity volana ity amin’ny fanolorana ny andro ataontsika isan’andro hitrotro am-bavaka ireo rehetra mijaly. Tsy zoviana amintsika intsony moa ny fijaliana mihatra amin’ny zanak’olombelona ankehitriny, indrindra amin’izao fielezan’ny valan’aretina mamotika ny ain’olona maro izao. Fa …
Feno 5 taona ny Laudato Si. Ankoatry ny vavaka samirery dia hiaraka hanandratra ity vavaka ity isika ny alahady 24 mey amin’ny mitataovovonana. ———– Ry Andriamanitra tia anay, Mpahary ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra eo aminy, Nataonao nitovy endrika taminao izahay, ary nataonao ho mpiandry ny voaharinao sy ny tranobe iombonanay. …
“Izahay mifefy aminao ry Reny Masin’Andriamanitra” Amin’izao zava-mitranga mampitaintaina, feno fijaliana sy fanahiana mamely an’izao tontolo izao ankehitriny izao, midodododo any Aminao, Renin’Andriamanitra sy Reninay izahay, ary mitady fialofana eo ambany fiarovanao. Ry Maria Virjiny, atodiho aminay ny masonao feno indrafo amin’izao iatrehanay ny valan’aretina Coronavirus izao, ary ankaherezo ireo rehetra very hevitra sy mitomany …
Covid 19, Raozery
Ry Maria ô, Ianao izay mamirapirapitra mandrakariva eo amin’ny làlanay, toy ny famantarana ny famonjena sy ny fanantenana. Mitoky aminao, Fahasitranan’ny marary izahay, Ianao ilay niombona tamin’ny fijalian-janakao teo am-pototry ny hazofijaliana, nefa nijoro ho mafy orina hatrany tamin’ny finoana. Ry Maria, Vonjin’ny vahoaka …, fantatrao izay ilainay, ary azonay antoka fa hotsinjovinao ny hiverenan’ny …
TSATILAKRI ! Indro ampitaina amintsika ny fanapahan-kevitry ny Fivondronam-ben’ny Eveka eto Madagasikara, nampitain’i Mgr Benjamin RAMAROSON, Arsevekan’Antsiranana. « Tsy hotanterahina amin’ity taona ity ny Kongresy Eokaristika miaraka amin’ny faha-100 taonan’ny FET saika hatao tany Antsiranana. Amin’ny fivoriana manaraka no manapaka izay mety ho tohiny ». Araka izany àry dia mazava ny fanapahan-kevitr’ireo Eveka Raiamandreny fa tsy ho tanterahina …
FET 100 taona, Foibe Nasiönaly
« Mba ho famantarana ny maha mpanompo ny Eglizy anie ny fijoroan’ny Diakra amin’ny fanomezam-pahasoavana hitory ny Tenin’Andriamanitra sy hanompo ny mahantra ». Ho an’ireo Diakra indray no iompanan’ny fangatahana anentanan’ny Papa Ray Masina ny vita Batemy rehetra mandritra ny volana Mey, amin’ny vavaka fanolorana ny andro izay atao isan’andro. Ny Diakra izay manana anjara toerana …
« Ry zatovo, izaho mandidy anao, mitsangàna ! » (Lk 7,14) Ry tanora malala, Tamin’ny Oktobra 2018, niaraka tamin’ny sinaodan’ny Eveka momba ny lohahevitra “ny tanora, sy ny finoana ary ny fandalinana ny antson’Andriamanitra” ny Eglizy no nanao dingana momba ny fandalinana ny zava-misy iainanareo amin’izao tontolo ankehitriny izao, momba ny fikarohanareo ny dikan’ny fiainana …